युट्युबमा यस्तो पनि गर्न सकिन्छ
युट्युबमा यस्तो पनि...
कात्तिक २०७४ अहिले युट्युब भिडियो सेयरिङका लागि चर्चित साइट हो। युट्युबबाटगर्न सकिने केही विषय, जुन तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ।१. जिफ इमेज:तपार्इँ जिफ इमेज बनाउन चाहुनुहुन्छ भनेयुट्युबभन्दा अघि जिआइएफ राखेर जीआइएफयुट्युब डट कममा जानुस्।२. भिडियोको स्पीड बढाउन :कुनै ट्युटोरियल हेर्दा तपाईँले युट्युब स्लोपाउनु भएको छ?सेटिङ ट्याबमा गएर स्पीड सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यहाँ...
विभिन्न स्वास्थ्यबर्द्धक गुणहरुका कारण मेथीको साग अत्यन्त लाभदायक मानिन्छ । मेथीका यी ११ फाइदा:- १.धेरैजसो मानिसहरुलाई पेटसम्वन्धि मस्याले हैरान पार्छ । यसमा कब्जियत र ग्यास्ट्रिक प्रमुख छन् । मेथीको हरियो साग खाँदा तपाईंको पाचनतन्त्रले सुचारुरुपमा काम गर्नुका साथै कब्जियत वा ग्यास्ट्रिक जस्ता समस्याबाट छुट्कारा दिलाउँछ । २. घरका वृद्धवृद्धाहरुले जाडोमा मेथी र...
स्मरण शक्ति बढाउन चाहनुहुन्छ ? यस्ता छन् स्मण शक्ति बढाउने खानेकुरा
एकाग्रता बढाउन चाहनुहुन्छ ? त्यसो भए आफ्नो भोजनमा फलफूल, होल ग्रेन, माछाका परिकारसँगै एक कप कफी पिउनुहोस् । यसबाहेक सधैं सन्तुलित आहार लिनुहोस् भन्छन् पोषणविद्हरू । उनीहरू यस्तो सल्लाह दिन्छन् : मस्तिष्क र शरीर स्वस्थ्य राख्न पर्याप्त व्यायाम गर्ने तनावमुक्त रहन र प्रष्ट विचारका लागि ध्यान गर्ने राति पर्याप्त सुत्नुहोस् (निदाउने) पर्याप्त पानी पिउने स्मरण शक्ति...
यसरी हुन्छ ग्याष्ट्रिकबाट अल्सर र क्यान्सर, ग्याष्ट्रिकका बिरामीले के खाने, के नखाने?
कात्तिक २०७४ मानव शरीरमा हुने रोगहरु मध्ये ग्याष्ट्रिक पनि एक हो। खानपानको असन्तुलन र हेलचेक्राइ गरेमा यो रोग लाग्दछ। चिकित्सकीय भाषामा ‘प्रिभ्रेन्सन इज बेटर द्यान क्युर’ भनिन्छ। त्यसैले रोग लाग्नुभन्दा पहिले सावधानी अपनाए रोग लाग्दैन्। ७५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसलाई खानपिनको कारणा ग्याष्ट्रिक भएको देखिन्छ।अहिले ग्याष्ट्रिक नभएको मानिस नेपाली हुन सक्दैन भन्ने...
कार्तिक २६, २०७४ संसारकै पहिलो फाइभ जी स्मार्टफोनको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । ट्वीटर युजर शेरिफ हान्नाले आफ्नो ट्वीटर एकाउन्टमार्फत फाइभ जी स्मार्टफोनको तस्बिर सेयर गरेका हुन् । उनी चिपसेट निर्माता कम्पनी क्वालकममा एलटीई तथा फाइभ जी एनआरमा बजार प्रमुखको पदमा छन् । शेरिफले लेखेका छन्, ‘मेरो हातमा संसारकै पहिलो फाइभ जी स्मार्टफोन छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न मलाई मुस्किल...
यौनसम्पर्कको बेला कण्डम प्रयोग गर्नाले गर्भाधारण हुनबाट मात्र रोकिँदैन, कैयौँ प्रकारका यौनजन्य रोगहरूबाट बँच्न सकिन्छ । कण्डम सुरक्षित यौनसम्पर्कको लागी अती जरूरी छ । तर एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्, कण्डम सुरक्षित यौनसम्पर्कको लागी जती अत्यावश्यक छ, त्यसको एक्पायरी समय पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ । सुरक्षित यौनसम्पर्कको लागि के तपाई कण्डमको मिति गुज्रने अर्थात् एक्पायरी...
नुहाएपछि कपाल यसरी सुकाउनुस
कात्तिक २५ जाडो मौसममा नुहाएपछि छिटै कपाल सुक्दैन । अझ लामो कपाल सुक्न त धेरै समय लाग्छ । त्यसैले महिलाहरू विभिन्न उपाय लगाएर जतिसक्दो छिटो कपालको चिसोपन हटाउन खोज्छन् । कपाल सुकाउन हेयरड्रायर प्रयोग गर्न सबैलाई सम्भव नहुन पनि सक्छ । यो अवस्थामा केही सजिला उपाय अपनाउन सकिन्छ : कन्डिसनर प्रयोगपछि काइँयोले कोर्ने कन्डिसनर प्रयोग गरेपछि कपाल चाँडै सुक्छ । हातको औँलाले...
शुक्रवार, कात्तिक २४, २०७४ बरिष्ठ साहित्यकार उषा शेरचन भारतिय टेलिभिजन च्यानलबाट प्रशारण हुने गीतसंगीत र नृत्य सम्बन्धि रियालिटी शोहरु प्राय हेर्न छुटाउन्‍न्। यी शोहरुमा अत्यन्तै कम उमेरका बालबालिकाले पनि निकै सुन्दर ढंगमा गीत र नृत्य प्रस्तुत गरेको हेर्दा उनलाई रमाइलो लाग्छ।जी टिभीबाट प्रशारण हुने सारेगमप लिटिल च्याम्पस गत साता मात्रै सकियो । यो आउन्जेल सँधै नछुटाइ...
एजेन्सीइस्लामावादपाकिस्तानमा उत्तर कोरियाका राजदूतको घरबाट ह्विस्की, बियर र वाइनको बोतल चोरी भएको घटना बाहिर आएको छ । यसपछि उनीमाथि रक्सी तस्करीको गर्ने गरेको शंका गरिएको छ । पाकिस्तानमा मुसलमानका लागि रक्सी सेवन गैरकानुनी हो, यसैकारण यहाँ रक्सी सजिलै पाइदैन । राजदूतलाई रक्सीका लागि व्यक्तिगत भत्ता दिने गरिन्छ । अक्टुवरको महिनको शुरुमै पाकिस्तानमा उत्तर कोरियाका...